Iwe Unogona Ikozvino Kutenga Samsung's Killer Nyowani Ultra Pfupi Kukanda Projekita
Muri pano: musha / Technology News / Iwe Unogona Ikozvino Kutenga Samsung's Killer Nyowani Ultra Pfupi Kukanda Projekita
Ultra Pfupi Kukanda (UST) mapurojekita inzira yakanaka yekuwana chiwoniso chakakura mukamuri diki. Zvese zvaunoita kuisa UST projekita masendimita kubva pamadziro uye ndokudaidza zuva. Asi ivo inodhura tech nyowani, seuchapupu na Samsung's Premiere Projekita. Iyo inouya mumhando mbiri, iyo LSP7T ye $ 3,499.99 uye iyo LSP9T $ 6,499.99. Uye unogona zvitenge izvozvi.
Ultra Pfupi Kukanda Mapurojekiti anobatsirwa nekushanda mune chero nzvimbo, chero zvingave zvidiki kana kupenya. Ivo vanoburitsa yakajeka-yakajeka mifananidzo iyo iwe yaunogona kuona mune yakanaka-yakavhenekerwa mukamuri. Uye mufananidzo wacho wakajeka zvakakwana; unogona kutiza nekusvetuka sikirini uye kuratidzira wakananga kumadziro. Uye unosvika pakuita izvozvo kubva pamasendimita kubva pamadziro.
Mutengo wekutanga wemadhora mazana matatu nemazana mashanu, nepo uchidhura, uri mukati memitengo yemari yeiyo Ultra Pfupi Kukanda purojekita. Iwo asingadhuri purojekita eUST anouya mune angori pasi pe $ 3,500 uye anowanzo shandisa yechinyakare vhezheni yeApple asina kuwana yeGoogle Play chitoro. Izvo zvinokusiya uchipedza yakawanda paRoku Stick kana Fire TV kuti uwane mukana weNetflix neHulu.
Iyo Premiere inouya kubva kune yakasimbiswa zita, Samsung, uye inosanganisira smart TV interface. Izvo zvinoita kuti iyo yekuwedzera dongle itenge zvakanyanya kusarudza. Unogona kunge uchiri kuchida, asi hauchichidi.
Iwe unowana 4K purojekita ine yakavakirwa-mukati mutsindo system uye kuwana kune Bixby uye Alexa yemari yako. Iwe zvakare une Netflix, Hulu, uye mamwe maapplication ekushambadzira kunze kwebhokisi. Asi senguva dzose, kushandisa zvimwe zvinokuwanira iwe zvimwe.
Iyo $ 3,499.99 LSP7T Premiere inogona kuratidza mufananidzo kusvika kumasendimita makumi maviri uye inoshandisa tekinoroji ye laser inokwanisa 120 lumens. Iyo mitambo iyo 2200 ruzha system uye yemutambo modhi yekudzora lag. Unogona kudzora chirongwa nezwi, kungave kuburikidza neBixby kana Alexa.
Unogona chitenge nhasi kubva kuri Samsung.
Kukwira kusvika ku $ 6,499.99 kunokutorera zvese izvo uye nezvimwe. Iyo yepamusoro-kumagumo LSP9T Premiere inoshandisa katatu-laser system, iyo inobvumidza iyo kuratidza mifananidzo muHDR10 + yeakajeka yakajeka uye musiyano. Iyo sisitimu zvakare inoreva kuti purojekita inokwira kumusoro kune inopenya 2,800-lumen kugona.
Iyo projekita inonzwika zvirinani, zvakare, nekuda kweiyo 4.2 ruzha system. Iwe uchiri kuwana Alexa, Samsung's Smart Tv interface, uye yakafanana dhizaini dhizaini iyo inofanirwa kutaridzika zvakanaka mumakamuri mazhinji ekugara.
Unogona tenga yakakwira yekupedzisira Premiere nhasi kubva kuSamsung.
LG HU85LA CineBeam 4K UST Projector Ongororo - Iyo Yakanyanya MuUST 4K Uzoitika?
Akanakisa eprojekita masikisi 2020: Akanakisa emamuvhi masikati masikirini kutenga iyi Nhema Chishanu
Maitiro Ekubatanidza Iyo Projekita Kuna A Windows Kana Mac Komputa
ViewSonic X10-4K ongorora: Chiitiko chekirasi
BenQ TK850 4K HDR Projector Ongororo